အိပ်ရေးပျက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကြိုးများ - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Health » အိပ်ရေးပျက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကြိုးများ
Min Thuta | Health, Knowledge | July 14, 2019
လူတစ်ယောက်အတွက်အိပ်စက်ခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့ဆိုးကျိူးတွေကတော့အလွန်များပါတယ်။ ဒီတော့အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်မဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
၁. တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း သင်ယူမှုစတာတွေအတွက်အိပ်စက်ခြင်းဟာအရေးပါပါတယ်။အိပ်ရေးပျက်ရင်တော့ တွေးခေါ်သင်ယူနိုင်စွမ်း၊အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းစတာတွေကိုထိခိုက်စေပြီး အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ရာခိုင်နှုန်း များပါတယ်။
၂. အိပ်ရေးပျက်ရင်တော့အဓိကထိခိုက်မှာက ကျန်းမာရေးပါ။နှလုံးရောဂါ၊ဆီးချိုရောဂါ၊နှလုံး ခုန်မမှန်တာ၊ သွေးတိုးရောဂါ စတာတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
၃. အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့်စိတ်ကျရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်ပြီးအရာရာအပေါ်စိတ်တိုလွယ်ကာအမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်စေပါတယ်။တစ်နေ့အိပ်ချိန် ၆ နာရီထက် လျော့နည်းတဲ့သူတွေမှာစိတ်ကရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
၆.အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့်အဝလွန်ရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။အိပ်ရေးမဝလျင်အစာကိုတောင့်တပြီးအစာစားခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွာစေတဲ့အတွက် အလွန်အမင်းစားသုံးခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။အိပ်ချိန် ၆ နာရီထက်လျော့နည်းတဲ့သူတွေရဲ့ ၃၀% ဟာအဝလွန်ရောဂါကို တနေ့အိပ်ချိန် ရနာရီနဲ့၉နာရီကြားအိပ်သူတွေထက်ပိုခံစားရပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာအနည်းဆုံးတစ်နေ့အိပ်ချိန် ၆နာရီတော့ရှိသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်နည်းပြီးအိပ်ရေးပျက်တာရက်တွေဆက်လာရင်တော့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေရုံသာမက လူမှုဘဝနေထိုင်မှုမှာလည်း ဆိုးကျိုးတွေရှိလာပြီး အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့အချက်တွေကိုမဖြစ်စေလိုလျင်အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
by Min Thuta on 18 hours ago -0Comments
All times are GMT 6.5. The time now is 10:57 am.